Leila Shahid: "Dhaqanka kaliya ayaa ka soo bixi kara dhaawac culus" - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » International Leila Shahid: "Dhaqanka waxaa kaliya oo ka iman kara dhaawac culus" - JeuneAfrique.com
Leila Shahid: "Dhaqanka waxaa kaliya oo ka iman kara dhaawac culus" - JeuneAfrique.com
Afhayeen u hadlay Falastiin, Leila Shahid (ku dhowaad) ayaa xirxiray gacmo gashi si loogu dhiirrigeliyo farshaxanka toddobaad ee Carabta.
Runtii waxba kama qaban kartid ... horay uga sameysan shaah shimbir ah, banaanka banaanka ee makhaayadda Carabta ee Machadka Carabta (iyada oo ah madaxweynaha Jaaliyada Saaxiibada ee IMA), Leila Shahid Fulminates oo ka soo hor jeedda Tofed, kaas oo aqoonsaday madax banaanida reer binu Israa'iil ee Golan Heights.
Sida rasmiga ah, ma aysan ku lug laheyn siyaasadda tan iyo markii 2015, markii ay go'aansatay inayan sii aheyn safiir ka mid ah Falastiin. Laakiin shirkada Panorama des Cinémas du Maghreb iyo Bariga Dhexe, oo u dabaaldegaya sannad-guuradooda XNUM ee sanadkaan, waxay leedahay xanaaq iyo jahwareer.
Maanta, ma rabo inaan u sheego saaxiibadey Falastiin, laakiin inaan faa'iido u helo iyaga oo kor u qaadaya wax soo saarka dhaqanka Carabta
Jeune Afrique: Maxaad u go'aamisay, 2015, in aad iskaa u qabato hawlaha dhaqanka?
Leila Shahid: Dibloome, ha ahaato Falastiin ama Carab, waa wax aan fiicnayn. Inuu noqdo Ergeyga Guud ee Falastiin ee Midowga Yurub ee Brussels, si wanaagsan ayaan u hayaa in aan sheego in dibloomaasiyadda Yurub aysan aheyn wax ka wanaagsan: waxay u codeeyeen go'aamada, laakiin ma ayan ku dhaqmin! Taageerada Mareykanka ee Trump ee dowladda Israel ayaa leh cawaaqib xun ...
Iyadoo 641 basas cusub oo nadiif ah, Ile-de-France waa tartan gaadiidka cagaaran
XUSUUSAHA ANSONGO: Kordhinta baahida bani'aadamnimada ee aagga ka jirta amni darada